Ukuthengiswa kwe-FCFD: Yintoni iCFD? Isikhokelo sokuqala kwiNZUZO ngoJanuwari 2022
URhwebo lweCFD: Yintoni iCFD, kwaye ndingaqala njani ukurhweba ngeCFD ngo-2021?
Ukuhlaziywa: 19 Disemba 2021 Inyaniso ihlolwe
Eli nqaku liye lajongwa ukuba limele olona lwazi luchanekileyo ngexesha lokubhalwa.
Ukurhweba ngeCFD kwindawo yotyalo-mali ekwi-Intanethi kuxakeke yimigaqo yezemali ethi iliso elingafundiswanga-inokubonakala ngathi iyabhidisa. Phambili koku yindawo ye-CFD yezigidi ezininzi zeepawundi.
Kwimo yayo esisiseko, iiCFD zikuvumela ukuba utyale imali kwiasethi ngaphandle kokuba ungumnini wayo. Endaweni yoko, ucinga nje ngexabiso lempahla yexa elizayo.
Ngaba unomdla wokufumanisa ukuba zeziphi iiCFD kwaye kutheni usenokugqiba kwelokuba uzibandakanye kwiinjongo zakho zexesha elide lotyalo-mali? Ukuba kunjalo, qiniseka ukuba ufunda ngokubanzi Isikhokelo sokurhweba seCFD. Ngaphakathi kuyo, sigubungela ii-ins kunye nokuphuma kwezi zinto zii-CFDs, zisebenza njani, zikuvumela ukuba urhwebe, kunye nokunye.
Qaphela: IiCFD ziludidi lweeasethi ezinokuqikelelwa. Qinisekisa ukuba unokuqonda okuqinisekileyo komngcipheko ophambi kokuthengisa.
Zithini i-Pros and Cons of Trading CFDs?
Rhweba ngeasethi ngaphandle kokufuna ukuba ngumnini okanye ukuyigcina
Amawaka eeklasi zeeasethi ezikhoyo
Imirhumo kumaqonga orhwebo e-CFD aqhelekileyo asezantsi
Iimakethi zisebenza nge-24/7
Ii-CFD zikuvumela ukuba uhambe zombini kwaye umfutshane
Awuyi kuba nelungelo kumalungelo otyalo-mali-njengezahlulo
Yintoni iCFD? Intsingiselo elula yeCFD
Ikhontrakthi yomahluko, okanye i-'CFD 'nje, sisixhobo semali esivumela ukuba uthengise iasethi, okanye iqela leeasethi, ngaphandle kokufuna ukuba ngumniniyo. Endaweni yoko, ucinga nje ukuba ucinga ukuba ixabiso le-asethi liza kunyuka okanye liye ezantsi. IiCFDs sisixhobo sokurhweba esiluncedo kakhulu, ubuncinci kuba zinokumela phantse naluphi na udidi lweeasethi.
Umzekelo, masithi ubufuna ukurhweba ngegolide. Ngengqondo yesiko, ibiya kuba yinto enzima yokuthenga kunye nokugcina igolide ngombono wokwenza inzuzo. Kukwayimeko nezinye izinto ezinzima ezifana neoyile kunye negesi yendalo. Ngale nto ithethwayo, indawo ye-CFD igubungela mawaka yeeasethi.
Nokuba isitokhwe sayo kunye nezabelo, ii-ETFs, ikamva, ukhetho, ii-cryptocurrensets, amandla, amaxabiso enzala, okanye ii-indices- uya kuyifumana iCFD. Nangona awunayo iasethi esezantsi ngentetho nganye, ii-CFD zikuvumela ukuba uthengise iiasethi ngendlela efanayo.
Umzekelo, masithi ufuna ukutyala imali kwi-S & P 500. Kwabo bangaziyo, i-S & P 500 sisalathiso semarike yesitokhwe esilandela iinkampani ezinkulu ezingama-500 ezidweliswe kwi-NYSE nakwi-NASDAQ. Endaweni yokufuna ukuthenga izabelo ezingama-500 ngokwahlukeneyo, unokuthenga iCFD enye. Ngokuxhomekeke kwindlela ehamba ngayo iimarike, uya kwenza inzuzo okanye ilahleko njengoko ixabiso le-S & P 500 lihamba.
Zisebenza njani iiCFD?
Ii-CFDs zilula kakhulu ukurhweba wakube uyayazi into oyenzayo. Isizathu soku kukuba ii-CFDs zisebenza ikakhulu njengaso nasiphi na isixhobo esinokuthengiswa. Ngamanye amagama, xa usithathile isigqibo sokuba yeyiphi indlela ocinga ukuba iiasethi zakho ozikhethileyo ziya kuhamba kwiimarike, kufuneka ubeke intengiso kwaye unqume apho iphuma khona indawo yakho.
Ngale nto ithethwayo, kungcono ukuba sikunike imizekelo embalwa yokucoca inkungu.
Umzekelo woRhwebo lweCFD 1: Ukuhamba ixesha elide kwizabelo zeHSBC
Masithi uyakholelwa ukuba ixabiso lezabelo ze-HSBC ngenxa ye Nyusa kwixesha elifutshane. Njengoko ujonge ukubeka urhwebo lwexesha elifutshane, ngekhe kube sengqiqweni ukuthenga izabelo ngengqondo yesiko. Ngokwenza njalo, uya kubethwa yimirhumo emikhulu enokuthi yenze ukuba urhwebo lungabinakho. Endaweni yoko, uthatha isigqibo sokuthenga izabelo ze-HSBC ngohlobo lweCFD.
Uthenga ii-10 x ii-CFD kwi-HSBC nge- £ 5 ngesabelo ngasinye
Ubungakanani bakho bokurhweba bebonke yi- $ 50 (10 x £ 5)
Kamva ngala mini, ixabiso le-HSBC lonyuka laya kwi- £ 6 ngesabelo ngasinye
Ugqiba ekubeni uthengise iiCFD zakho, onokuzenza ngokucofa nje iqhosha
Ngelixa uthengise ii-CFDs nge- $ 1 ngaphezulu kunaleyo uyihlawuleyo (£ 6- £ 5), wenze inzuzo iyonke ye- $ 10 (ubunezabelo ezili-10)
Ngokubalulekileyo, ukwazile ukwenza inzuzo kwixabiso elizayo le-HSBC ngaphandle kokuba nezabelo ngokwenyani. Endaweni yokuba uthathe inxaxheba kurhwebo lweCFD.
Umzekelo woRhwebo lweCFD 2: Ukuhamba ngokufutshane kwioyile
Kulo mzekelo, uthatha isigqibo sokuba ufuna 'ukufutshane' kwioyile. Oku kuthetha ukuba uyakholelwa kwixabiso ioyile uya kuhla. Ukunqumlela yenye yezona zinto zinomtsalane kwii-CFDs, njengoko zikuvumela ukuba uzuze naxa iimarike ziphantsi. Inkqubo yokuthengisa emfutshane isebenza ikakhulu ngokufanayo nomzekelo ongentla wokuhamba ixesha elide, nangona ubuyela umva.
Uthengisa ii-20x CFDs kwioyile nge $ 70 ngebhafu
Oku kuthetha ukuba ubungakanani bakho beshishini lilonke $ 1,400 (20 x $ 70)
Kamva ngaloo mini, ixabiso leoyile liyehla laya kwi-60 yeedola ngomgqomo ngenxa yemveliso eseleyo eSaudi Arabia
Kananjalo, ngoku ujonge isibonelelo se- $ 10 ngomgqomo
Une-20 x CFDs, yiyo loo nto i $ 200 kwinzuzo
Ukuze uqonde inzuzo yakho, uya kucelwa ukuba uphinde uthenge ii-CFDs, njengoko ekuqaleni ubeke i-odolo emfutshane
Njengoko ubona kumzekelo ongentla, ukuthengisa okufutshane kwisithuba seCFD kuchanekile njengokuhamba ixesha elide.
Zeziphi iimakethi zeCFD endinokuzithengisa?
Ngamafutshane, ukuba ungarhweba ngeasethi kwiimarike zemali zesiko, emva koko unokuqiniseka ukuba i-CFD ikhona. Isizathu esiphambili soku kukuba iiCFD zilandelela nje ixabiso lehlabathi lokwenyani leasethi. Umzekelo, ukuba ixabiso legolide liyenyuka nge-3% kwimarike yehlabathi, i-CFD yegolide nayo iya kunyuka nge-3%.
Nangona kunjalo, sidwelise ezinye zeeklasi ze-CFD ezaziwa kakhulu apha ngezantsi.
Imirhumo yeCFD yokuRhweba
Ukuzibandakanya kurhwebo lweCFD, kuya kufuneka usebenzise umrhwebi okwi-Intanethi. Nangona siza kugubungela i-ins kunye nokuphuma kwendlela yokukhetha umthengisi weCFD kamva kwisikhokelo sethu, kubalulekile ukuba uphonononge ukuba yeyiphi imali yokurhweba ekufuneka uyazi.
Okokuqala nokuphambili, abarhwebi beCFD bakushishino lokwenza imali. Kananjalo, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini yokurhweba ngalo lonke ixesha uthenga kwaye uthengisa i-CFD. Ukuba uyakwenza oko, iya kuhlawuliswa njengepesenti yemali oyithengisayo.
Umzekelo, masithi uthenga ii-CFD ze- £ 1,000, kwaye umrhwebi ubiza i-1%. Oku kuthetha ukuba kuyakufuneka uhlawule ikhomishini ye- $ 10. Ngapha koko, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini xa uthatha isigqibo sokuthengisa iiCFD zakho. Kananjalo, ngaba ubuya kuthengisa ii-CFD ezifanayo xa zixabisa i- £ 1,500, ubuya kuhlawula i- $ 15 kwikhomishini.
Abarhwebi baseNewbie bahlala beyityeshela sasaza -Ngakumbi xa usebenzisa i-broker ebanga ukuba ibonelela ngorhwebo ngaphandle kwentlawulo. Nangona kunjalo, ukusasazeka ngumrhumo wokurhweba oza kuwuhlawula ngokungangqalanga. Ngeyona ndlela isisiseko, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' kunye nexabiso 'lokuthengisa'.
Umzekelo, masithi ujonge ukurhweba ngerhasi yendalo. Ukuba ixabiso lokuthenga lalingama- $ 51, kwaye ixabiso lokuthengisa laliyi- $ 50, oku kubonisa ukusasazeka kwe-2%. Ke ngoko, kuya kufuneka ubone urhwebo lwakho lonyuka ngexabiso ubuncinci nge-2% ukuze nje uphule. Kungenxa yoko le nto kufuneka ukhethe umthengisi weCFD onikezela ukusasazeka okuqinileyo.
Inkxaso mali ngobusuku
Kuya kufuneka wenze ingqwalaselo kwimali yobusuku ukuba ucwangcisa ukurhweba iiCFDs kwisisombululo. Ukubeka ngokulula, xa uthenga okanye uthengisa i-CFD kwisisombululo, uboleka imali ngokufanelekileyo kwi-broker ekuthethwa ngayo. Kungenxa yokuba umrhwebi ekuvumela ukuba urhwebe ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho.
Kananjalo, ukuhlawulwa kwemali ngobusuku kwi-CFDs kusebenza ngendlela efanayo nemali mboleko. Uya kuhlawula ipesenti encinci yenzala, ehlawuliswa ixesha elide ugcina indawo ivulekile ngaphezulu kweeyure ezingama-24. Njengoko amandla okudlala edlala indima enkulu kangaka kumzi mveliso weCFD, siza kuchaza ukuba isebenza njani kwicandelo elilandelayo.
Isebenza njani iCFD?
Kulabo banomdla omkhulu wokufumana umngcipheko, amandla okuvumela ukuba uthengise ngaphezulu kwezinto ozifumeneyo kwiakhawunti yakho yomrhwebi. Kwelinye icala, oku kukuvumela ukuba wandise inzuzo yakho ukuba uziva uzithembile malunga nentengiso ethile. Nangona kunjalo, ukuphakama sisixhobo sokuthengisa esisemngciphekweni omkhulu, njengoko unokukhulisa ngokulinganayo ilahleko yakho.
Xa usebenzisa ubungakanani kumashishini akho, uya kuthatha isigqibo sokuba ufuna ukufaka isicelo kangakanani. Oku kuchazwa njengeyona nto, njenge-2: 1, 5: 1, okanye 20: 1. Emva koko kuya kufuneka uphindaphinde 'umda' wakho ngento yokufumanisa ukuba urhwebo lwakho lubaluleke kangakanani.
Ukunyusa kunokuba yindawo yokulwa enzima ukuqonda xa uqala ukuyibona, ke sinike umzekelo olula apha ngezantsi.
Umzekelo wokusebenzisa amandla xa kuthengiswa iiCFD
Masithi unomdla wokurhweba i-FTSE 100- emele iinkampani ezinkulu ezili-100 ezidweliswe kwiLondon Stock Exchange (LSE). Emva kokubhengezwa kwesiphumo seRerexit Referendum, i-FTSE 100 yathatha into enkulu.
Ngale nto ithethwayo, uziva ukuba le yinto egqithisileyo kwiimarike kwaye i-FTSE 100 iya kuphinda ibuye ngosuku olulandelayo. Kananjalo, uthathe isigqibo sokurhweba nge-FTSE ngohlobo lweCFD. Nangona kunjalo, wawuzithemba kakhulu kurhwebo, ke uthathe isigqibo sokufaka isiseko kwi-10: 1.
Nantsi indlela urhwebo lwakho beluya kusebenza ngayo ngokwenza:
Unayo i- £ 1,000 kwiakhawunti yakho yomrhwebi yeCFD
Ufaka amandla kwi-FTSE 100 ngo-10: 1
Oku kuthetha ukuba uthengisa i- $ 10,000 kwi-FTSE 100
Ixabiso le-FTSE 100 lenyuka nge-5% ngosuku olulandelayo
Ngokwesiqhelo, urhwebo lwakho lwe- £ 1,000 lwalunokuvelisa inzuzo ye- $ 50 (£ 1,000 x 5%)
Nangona kunjalo, njengoko ufake isicelo somyinge we-10: 1, wenze inzuzo ye- $ 500 (£ 50 x 10)
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, xa urhwebo oluvunyiweyo lweCFD lisiya endaweni yakho, iinzuzo zakho zinokwandiswa ngumgama othile. Nangona kunjalo-ngaphandle kwenqanaba lamava akho, urhwebo aluyi kuyenza rhoqo hamba indlela yakho. Ngokuchasene noko, abathengisi abanamava baya kuhlala behlangabezana nelahleko.
Ngokubalulekileyo, ukuba i-FTSE 100 yehle nge-5%, ubuya kuba nayo ezilahlekileyo I- £ 500. Oko kukuthi, ewe, kwimeko yokuba usilele ukufaka ilahleko enengqondo yokumisa. Sukuba nexhala, sigubungela izicwangciso zokunciphisa umngcipheko ngokweenkcukacha ezithe kratya ezantsi.
Ndingasisebenzisa kangakanani isiXhobo sam seCFD?
Njengoko kuphawuliwe kwicandelo elingentla, ukurhweba ngokurhweba kugcwele umngcipheko. Oku kuthetha ukuba ungaphulukana nemali eninzi xa urhwebo lweCFD luchasene nawe. Kananjalo, uya kuncitshiswa kubungakanani bemilinganiselo onokuyisebenzisa kwimisebenzi yakho yeCFD.
Ayisiyiyo kuphela le mida inyanzeliswa ngumrhwebi wakho omkhethileyo, kodwa i-European Union kutsha nje ifake ii-caps kwinani lokuphakanyiswa abanokuthi basebenzise abathengisi.
Kananjalo, okoko i-UK ililungu le-European Union, kuyakufuneka ulandele umda wobungakanani obubekwe yi-European Securities and Markets Authority (ESMA) -esidwelise apha ngezantsi.
I-30: 1 yezibini eziphambili ze-forex
20: 1 kwizibini ezingezizo eziphambili ze-forex, igolide, kunye nezalathiso eziphambili
10: 1 wezinto zorhwebo ngaphandle kwegolide kunye nee-indices zokulingana ezingezizo ezona ziphambili
5: 1 kwisitokhwe ngasinye
2: 1 yee-cryptocurrensets
Nangona kunjalo, le mida ingentla ibekwe kuphela kwabo bangena ngaphakathi koxolelo lomrhwebi othengisayo. Ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo- kwaye unokwanelisa iimfuno zokuqinisekisa zomthengisi ochaphazelekayo, ukusikelwa umda kwe-ESMA akusasebenzi. Ngamanye amaxesha, oku kuthetha ukuba unokurhweba kwinqanaba lokuphakama ukuya kuthi ga kuma-500: 1.
Ukunciphisa iingozi zoRhwebo lweCFD
Njengayo nayiphi na enye indawo ye-intanethi yotyalo-mali, kuya kufuneka uthathele ingqalelo umngcipheko kurhwebo lweCFD. Ngokubalulekileyo, ukuba urhwebo aluphumi ngaphandle njengoko ubunethemba, uya kulahla imali. Xa kuthethwa oko, kukho inani lezixhobo onokuzisebenzisa ukunciphisa ukubonwa kwakho kukonke kurhwebo olulahlekileyo lweCFD. Eyona nto iphambili koku kukuyeka ukulahleka.
Esona sixhobo sibalulekileyo esiya kunciphisa amathuba akho okuphulukana nesixa esikhulu semali yilahleko yokumisa. Kwifom yayo esisiseko, i-odolo yokuyeka ilahleko ikuvumela ukuba uphume kurhwebo ngokuzenzekelayo xa amaxabiso athile ebangelwa. Umzekelo, ukuba ufinyeza igolide, kodwa ixabiso lonyuka ngokukhawuleza ngenxa yoxinzelelo kuMbindi Mpuma, i-odolo yokuyeka ilahleko inokunciphisa umda olahlekileyo.
Nanku umzekelo wendlela yokuyeka ukulahleka kwee-odolo zisebenza njani.
Ugqiba kwelokuba uhambe ixesha elide kwi-Bitcoin, okuthetha ukuba ucinga ukuba ixabiso liya kunyuka kwixesha elifutshane
Uthenga i-Bitcoin CFD kwi-10,000 yeedola
Ngaphambi kokuba ubeke urhwebo lwakho, ufaka i-odolo yokuyeka
Awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-10% yemali yakho yorhwebo, ke ubeka i-odolo yokulahleka kwi-9,000 yeedola
Urhwebo lwakho lweBitcoin luya ngokuchasene nawe, kwaye ixabiso litanki. Ukuphela kosuku, i-Bitcoin ilahlekile i-20% kwaye ngoku ixabisa i-8,000 yeedola.
Nangona kunjalo, ukwazile ukuphuma kurhwebo ngokuzenzekelayo kwi-9,000 yeedola- ngokomyalelo wokulahleka kokumisa owufakileyo.
Nangona ii-odolo zokuyeka ilahleko zinokusebenza ngokukuko ekunciphiseni ukubhengeza kwakho kurhwebo olulahlekileyo, ayisiyi-100% yobungqina bobudenge. Ngokuchasene noko, ngamaxesha okuguquguquka okuphezulu, i-odolo yokumisa ilahleko ayinakho ukwenziwa. Kungenxa yokuba umthengisi akanakho ukuthelekisa iodolo yakho nomnye umthengi eqongeni. Kwimeko enjalo, i-odolo yakho yokuyeka ilahleko ayinakukukhusela.
Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi zezokuba uninzi lwabarhwebi beCFD abasebenza kwindawo ekwi-Intanethi babonelela ngento ebizwa ngokuba 'sisiqinisekiso sokuyeka ukulahleka komyalelo'. Njengoko igama libonisa, oku kuqinisekisa ukuba i-odolo yakho yelahleko yokumisa iya kuwongwa-nokuba umthengisi uyakwazi ukufumana umthengi. Ukubuyisa ezi ziqinisekiso, kuyakufuneka uhlawule imali yokurhweba ephezulu, ehlala ikwimo yokusasazeka okubanzi.
Uyikhetha njani i-CFD Broker?
Ukuze ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nokuba yintoni i-CFD, isebenza njani, kwaye yeyiphi ingozi ekufuneka uyiqwalasele-ngoku siza kuphonononga into ekufuneka uyijongile xa ukhetha umrhwebi. Qaphela, akukho babarhwebi banye abalinganayo, ke kuya kufuneka uvavanye okubalulekileyo nina. Umzekelo, ngelixa abanye abathengisi begxile kwimirhumo yokuthengisa esezantsi kakhulu, abanye bagxila kububanzi beqonga labo lokuthengisa.
Nangona kunjalo, sicebisa ukuba kuvavanywe ezi zinto zilandelayo ngaphambi kokuvula iakhawunti yomthengisi entsha yeCFD.
Eyona metric ibalulekileyo ekufuneka ujonge kuyo kukuba umthengisi weCFD ulawulwa na okanye hayi. Ukuba uhlala e-UK, umrhwebi kuya kufuneka agunyaziswe liGunya lokuZiphatha kwezeMali (FCA).
Ukuba ayisiyiyo, umrhwebi akanalo uxolelo olusemthethweni lokusebenza. Kuyaphawuleka ukuba umthengisi weCFD ubambe iilayisensi kweminye imimandla.
Kuya kufuneka ukuba uqwalasele indlela oceba ngayo ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho yomthengisi yeCFD. Uninzi lwabarhwebi luya kwamkela imali okanye ikhadi letyala, kunye nokudluliselwa kwebhanki. Abanye abarhwebi bade bakuvumele ukuba ubeke imali nge-e-wallet enjengePayPal kunye neSkrill.
Ngaphezulu kweendlela ezithile zokuhlawula, kuya kufuneka ujonge amaxesha edipozithi / okurhoxa.
Imirhumo kufuneka ibe phezulu kuluhlu lwakho xa kuvavanywa ukuba umrhwebi ulungile na kuwe. Sikhetha abathengisi beCFD ababonelela ngorhwebo-lwasimahla. Ngokufanayo, sikhetha nabarhwebi ababonelela ngokusasazeka okuqinileyo.
Ukuba ucwangcisa ukurhweba ngokunyusa, kuya kufuneka ujonge imali ehlawulwa ubusuku bonke eza kusebenza.
Xa kuziwa kwibala lokuthengisa ngokwalo, kuya kufuneka uphonononge ukuba yeyiphi iklasi yeasethi yomthengisi weCFD. Umzekelo, ukuba ukhetha ukuthengisa ii-indices zentengiso yesitokhwe, jonga ukuba zingaphi iintengiselwano kuluhlu lwabarhwebi.
Abona barhwebi baphambili beCFD banikezela ngamawaka ezixhobo zemali.
Ukuba ujonge ukuthatha urhwebo lwakho lweCFD ukuya kwinqanaba elilandelayo, kubalulekile ukuba usebenzise izixhobo zetshathi. Ezi zixhobo zikuvumela ukuba uhlalutye amaxabiso embali ngendlela eqhubekekayo, emva koko ikunike elona thuba lifanelekileyo lokuqhuba urhwebo olunempumelelo.
Kananjalo, khetha umthengisi weCFD onikezela iimfumba zezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha.
Nokuba ungumrhwebi we-newbie okanye umtyali mali onamava onamava aphantsi kwebhanti lakho - ukusetyenziswa kwezixhobo zophando kuyimfuneko. Oku kuluncedo ngakumbi ukuba uthembele kuhlalutyo olusisiseko xa ubeka imisebenzi ye-CFD.
Abona barhwebi baphambili beCFD babonelela ngohlaziyo lweendaba zexesha lokwenyani, iingxelo zohlalutyo, kunye nezinto ezinokubakho izicwangciso zorhwebo kwimpahla ethile.
Ukuthengisa kweCFD: Ndiqala njani? Isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo
Ngaba ujonge ukuqala ngeakhawunti yokuthengisa ye-CFD namhlanje, kodwa ungaqinisekanga ukuba kufuneka wenze ntoni? Jonga isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo esithe sawachaza apha ngezantsi.
Inyathelo 1: Khetha uMthengisi weCFD
Ukuze uqale ukuthengisa ii-CFDs, kuya kufuneka usebenzise umrhwebi okwi-Intanethi. Kukho ngokoqobo amakhulu abarhwebi beCFD abalawulwayo abasebenza kwindawo yase-UK, ke ukhetho luninzi. Ngale nto ithethwayo, singacebisa ukuba sifunde eli candelo lingentla 'Ungayikhetha njani i-CFD Broker?'.
Emva kokuba ufumene umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho, qhubela phambili kwiNyathelo 2.
Ngoku kuya kufuneka uvule iakhawunti kunye nomthengisi okhethiweyo weCFD. Okokuqala, kuyakufuneka ufake ulwazi oluthile lomntu. Oku kuyakubandakanya igama lakho elipheleleyo, idilesi yasekhaya, umhla wokuzalwa, inombolo yeinshurensi yelizwe kunye neenkcukacha zonxibelelwano. Qinisekisa ukuba ulwazi luchanekile, njengoko kuya kufuneka ungqinisise kamva.
Uya kudinga ukubonelela ngolwazi malunga nokuma kwakho kwemali. Oku kuya kubandakanya imeko yakho yengqesho, umvuzo wonyaka, nokuba ngaba ungumnikazi okanye urenta ikhaya lakho.
Inyathelo 3: Amava okuThengisa kwangaphambili
Ukuze uhlale uthobela i-FCA, i-UK CFD brokers kufuneka iqinisekise ukuba ubuqonda kakuhle ubungozi borhwebo. Kananjalo, uya kubuzwa uluhlu lwemibuzo ngokubhekisele kumava akho okuthengisa kwangaphambili-njengeentlobo zeeasethi okhe watyala imali kuzo ngaphambili, kunye nobukhulu obuphakathi bezorhwebo lakho.
Uya kudinga ukuphendula imibuzo emininzi ekhethiweyo kwimingcipheko yokufumana amandla.
Inyathelo 4: Qinisekisa isazisi sakho (i-KYC)
Ngaphambi kokuba ufake imali kwaye uqale ukurhweba, kuyakufuneka uqinisekise isazisi sakho. Kwakhona, oku kukuqinisekisa ukuba umrhwebi uhlala ethobela i-FCA, kunye nomthetho wase-UK malunga nokuchithwa kwemali.
Sukuba nexhala inkqubo yokungqinisisa kulula kakhulu, kwaye ifuna ukuba ulayishe amanye amaxwebhu. Kwiimeko ezininzi, kuyakufuneka ulayishe ikopi yencwadana yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba, kunye nobungqina bedilesi (efana nengxelo yebhanki okanye ityala elisebenzisayo).
Nje ukuba isazisi sakho siqinisekiswe. ungayixhasa ngemali iakhawunti yakho yomthengisi yeCFD. Iindlela zokuhlawula ezixhaswayo ziya kwahluka kwi-broker-to-broker, nangona oku kuhlala kubandakanya ukuhanjiswa kwebhanki ubuncinci. Amakhadi etyala kunye neebhanki nawo anokwamkelwa. Ngamanye amaxesha, umthengisi weCFD unokukuvumela ukuba ubeke imali nge-e-wallet njengePayPal.
Siyavuyisana nawe - uvule ngempumelelo i-akhawunti yomrhwebi weCFD, waqinisekisa ubungqina bakho, kwaye wafaka imali! Ngenxa yoko, ngoku ukulungele ukuqala ukurhweba. Qaphela, ukuba usengu-newbie kwisithuba seCFD, uyacetyiswa ukuba uqale ngokurhweba ngexabiso elincinci.
Nangona abanye abagqabazi becebisa ukusebenzisa iakhawunti yedemo, oku kuza neziphene zayo. Ngobunzima, iiakhawunti zedemo azizukukulungiselela icala leemvakalelo lokulahleka kwemali. Njengoko le iyinto eya kufunyanwa ngabo bonke abathengisi, kungcono ukuqala ikhondo lakho leCFD ngeziteki ezincinci.
Isikhokelo sokuthengisa seCFD: Isiphelo
Ukuba ukhona ukufunda Isikhokelo sethu ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni, kuya kufuneka ngoku ube nombono oqinisekileyo wokuba zeziphi iiCFD, zisebenza njani, kwaye zeziphi iingozi ekufuneka uziqwalasele. Ngezicwangciso ezifanelekileyo zokunciphisa umngcipheko ezikhoyo, indawo ye-CFD inokuqhuba uninzi lweenjongo zakho zexesha elide lotyalo-mali. Nokuba ujonge ukufumana ukubonwa kwizitokhwe kunye nezabelo, ii-indices, amaxabiso enzala, ii-ETFs, okanye ii-cryptocurrensets- iiCFD zikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iiasethi ngonqakrazo lweqhosha.
Sikwabonelele ngesikhokelo ngokubaluleka kokukhetha umthengisi weCFD. Ngamakhulu amaqonga onokukhetha kuwo, kuya kufuneka uhambe nomthengisi ohlangabezana neemfuno zakho. Eli isenokuba liqonga elixhasa idipozithi ye-PayPal okanye iqonga elibiza iifizi eziphantsi kakhulu. Nokuba yeyiphi na indlela, qiniseka nje ukuba wenza inkuthalo efanelekileyo kumthengisi weCFD ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Ima ngantoni iCFD?
I-CFD imele isivumelwano-somahluko.
Ukusasaza ukubheja v CFD - Uyintoni umahluko?
Kwelinye icala, ukurhweba ngeCFD kunye nokusasaza ukubheja kuyafana, ngaphandle kokuba uyakwazi ukurhweba ngezixhobo zemali ngaphandle kokuba ube ngumnini weasethi. Nangona kunjalo, ukubalwa kweenzuzo kunye nelahleko kulapho iiCFDs kunye nokusasaza ukubheja kwahlukile.
Yeyiphi eyona dipozithi encinci efunekayo kumthengisi weCFD?
Oku kuyakuxhomekeka kumthengisi weCFD ekuthethwa ngaye. Uninzi lwabarhwebi abasebenza kwindawo yase-UK baya kucela ubuncinci i- $ 100, nangona abanye benokucela ngaphezulu.
Ngubani olawula abarhwebi beCFD e-UK?
Igunya lokuZiphatha kwezeMali linoxanduva lokugunyazisa kunye nokulawula abarhwebi beCFD e-UK. Xa kuziwa kwimida yokunyusa, i-UK CFD brokers kufuneka ithobele ii-caps ezichazwe yi-ESMA.
Ndingathengisa ngantoni kumthengisi weCFD?
Abarhwebi beCFD basingatha amawaka ezixhobo ezithengiswayo. Nokuba ujonge ukurhweba esitokhwe kunye nezabelo, ii-ETFs, ii-indices, amaxabiso enzala, i-cryptocurrensets, okanye amandla- uya kuyifumana iCFD.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezenziwa ngabarhwebi beCFD?
Iindlela zokuhlawula ezixhaswayo ziya kwahluka kubarhwebi. Oku kunokubandakanya ukuhanjiswa kwebhanki, imali / ikhadi lekhredithi, okanye i-e-wallet.
Ndingaba mfutshane xa ndirhweba ngee-CFD?
Ngokuqinisekileyo unako. Ngapha koko, le yeyona nto iphambili kwiCFD, njengoko zikuvumela ukuba uzuze nokuba iimarike ziphantsi.